बारा-पर्सामा भएको के हो ? मौसमविदले दिए यस्तो चमत्कारिक प्रतिक्रिया – जलजला अनलाइन
बारा-पर्सामा भएको के हो ? मौसमविदले दिए यस्तो चमत्कारिक प्रतिक्रिया
Posted on April 1, 2019 Author Comments Off on बारा-पर्सामा भएको के हो ? मौसमविदले दिए यस्तो चमत्कारिक प्रतिक्रिया
चैत १८, काठमाडौं । आइतबार बेलुका आएको प्रकृतिक विपद्‍मा बारा र पर्सा जिल्लामा गरी मृत्यु भएका २७ जनाको शव भेटिएको पछिल्लो जानकारी आएको छ। ४०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।
यो खबर आकाश क्षेत्रीले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । मृतकको संख्याबारे सरकारी निकाय तथा व्यक्तिहरूकै आआफ्ना तथ्यांक आएका छन्। सयौँ घाइते भएको र उद्दार कार्य जारी रहेकोले क्षतिको विवरण बढ्नु अस्वभाविक भएन तर खासमा बारा र पर्सामा आएको प्राकृतिक विपद् के हो भन्नेमा पनि अन्योल देखिएको छ।
अरु त अरु मौसविद्हरूले पनि यसलाई नामाकरण गर्न सकेका छैनन्। र, यसको प्रकृति खुट्याउन सकेका छैनन्। प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटनामा भएको क्षति ‘ब्रेक’ गर्ने क्रममा गरेका ट्विट हेरौँ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो ट्‍विटमा ‘डरलाग्दो ऑधी/हुरी’ भनेका थिए। तर बिहान गरेको ट्विटमा भने उनले ‘त्रासद आँधी हुरी’ लेखेका छन्। त्यसपछिको ट्‍विटमा उनले ‘त्रासद् आँधी’ मात्र लेखेका छन्। नेपालका अधिकांश समाचार मिडियाहरूले यसलाई ‘हावाहुरी’ भनेका छन्। हामीले पनि हावाहुरी नै लेखेका छौँ।
तर यो खासमा के हो ? यो कस्तो प्रकारको हावाहुरी थियो भन्ने निष्कर्षमा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा पनि पुगेको छैन। यद्यपि, महाशाखाका विज्ञहरू यस विषयमा काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘हावाहुरी कस्तो प्रकारको थियो भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन, यसका लागि हामीले तथ्यांक (डाटा) मगाएर अध्ययन गर्नपर्ने हुन्छ’ विभागका वरिष्ठ मौसमविद् सुजन सुवेदीले भने, ‘यो असामान्य हावाहुरी हो भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ हामी पुगेका छौं।’
पर्याप्त प्रविधिको अभावका कारण विभागले अहिलेसम्म हावाहुरीबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न नसकेको सुवेदीले बताए। उनका अनुसार नेपालमा पहिलो पटक देखापरेको यो प्रकोपले अन्योल निम्त्याएको छ।
‘माथिल्लो वायु मण्डल र तल्लो वायु मण्डल एक आपसमा मिसिएपछि असामान्य हावाहुरी चलेको हामीले अनुमान गरेका छौं’, वरिष्ठ मौसमविद् सुवेदीले भने, ‘यसको रुप कस्तो थियो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन प्रयास गरिरहेका छौं।’
कास्कीको तल्लो भागबाट यो हावाहुरी सुरु भएको हुनसक्ने समेत मौसमविद् सुवेदीले अनुमान गरे। उनका अनुसार दक्षिण-पूर्वी भागमा बहने क्रममा उक्त हावाहुरीले बारा-पर्सामा वितण्डा मच्चाएको हो।
दाङवाट संघिय प्रहरी कार्यालय बुटवलमा किन सर्यो
Posted on July 19, 2018 Author
ओपेन्द्र बस्नेत/साउन ३, दाङ । दाङको तुलसीपुरमा रहेका दुई वटा ठूला प्रहरी कार्यालयहरु खारेजीमा परेका छन् । मुलूक संघिय संरचनामा गएपछि गरिएको प्रहरीको सांगठनिक पुर्नरसंरचना अनुसार अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म राप्ती र साविकको अंचल प्रहरी कार्यालय राप्ती हाल संघिय प्रहरी ईकाई कार्यालय तुलसीपुर, खारेजीमा परेका हुन् । खारेजी भएसंगै सशस्त्र प्रहरी गुल्म राप्ती र संघिय […]
पत्नीको अन्तिम विदाईमा मदनकृष्ण भावविव्हल (भिडियोसहित)
चैत, काठमाडौं । चर्चित हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई पत्नी शोक परेको छ । श्रेष्ठकी पत्नी यशोदा सुबेदी श्रेष्ठको गए राति साढे १० बजे निधन भएको हो । क्यान्सरबाट पीडित सुवेदीको ललितपुरको हरिसिद्धीस्थित क्यान्सर अस्पतालमा गएराति निधन भएको हो । ६७ वर्षीय सुवेदी आन्द्रा र फोक्सोको क्यानसरबाट पीडित थिइन् । आर्यघाटमा अन्त्येष्टि यशोदाको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि […]
आधा-आधा हिस्साले अर्को लफडा सुरुः ओलीको यस्तो तयारी
चैत १३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानु अघि नै पार्टी एकताको तयारीमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा पार्टी एकता गर्दा आधा-आधा गर्नुपर्ने बहस चर्किएको छ । एमालेले संगठनको आधारमा पार्टी एकता गर्नुपर्ने अडान अगाडि सारेको छ भने माओवादी पार्टी एकता नै हुने भए पछि आधा-आधा हुनुपर्ने अडान राखेको छ । […]
कहाँ हरायो हावाहुरीको पूर्वजानकारी दिने मौसमी राडार ? पढ्नुहोस
दाङ: २३ जनाको ज्यान गएको राम्रीको भिरबाट फेरि ट्रक खस्यो, ट्रक टुक्रा-टुक्रा अवस्थामा भेटियो